Sleeve House Degenaanshaha Qoysku - Joornaalka Naqshadeynta
Degenaanshaha Qoysku Gurigan runtii qaaska ah waxaa naqshadeeyey naqshadeeye iyo aqoonyahan Adam Dayem oo dhowaan ku guuleystay kaalinta labaad tartankii Mareykanka-Architects ee Dhismaha Sannadka. 3-BR / 2.5-qubayska guriga waxaa lagu fadhiyaa meel furan, oo duudduuban, oo leh meel awoodeedu sarrayso, iyo waliba dooxyo riwaayado ah iyo aragtiyo buur leh. Awood ahaan sida ay u ficantahay, qaab dhismeedka waxaa looraray jaantus ahaan sidii laba isugeyn oo gacmaha iswada eg. Wejiga alwaax ee alwaaxda laga xajmiyo wuxuu siinayaa gurigii mid darxumo leh, weji leh, oo dib-u-qeexid casriyeysan u leh baararkii hore ee Dooxada Hudson.
Magaca mashruuca : Sleeve House, Magaca naqshadeeyayaasha : Adam Dayem, Magaca macmiilka : actual / office.
Degenaanshaha Qoysku Adam Dayem Sleeve House